Wanga Abakuthiyileyo? Mhlawumbi luthando kubathandi bakho! | Martech Zone
Wanga Abakuthiyileyo? Mhlawumbi luthando kubathandi bakho!
NgoLwesithathu, Aprili 15, 2015 NgoMvulo, Aprili 20, 2015 Douglas Karr
Inqaku eliphambili lokuvala likaJay Baer lelinye lezona zibalaseleyo endizibonileyo kwiNtengiso yeNtlalontle yeHlabathi. UJay uxoxe ngencwadi yakhe ezayo, Bakhumbuze Intiyo. Inkcazo-ntetho yakhe yayihle kwaye yamhlekisa ngophando olumangalisayo UTom Webster kunye neqela lakhe malunga nendlela utyalomali ekusombululeni izikhalazo ngokukhawuleza nangendlela enokulikhulisa ngayo ishishini lakho.
Inkcazo-ntetho ithetha ngemizekelo emnandi yeenkampani eziphendula kwizikhalazo kunye nokuba zilungile njani kwishishini.
Ndingumntu othandabuzayo. Ngapha koko, kunyaka ophelileyo kwiNtengiso yezeNtlalontle yeHlabathi ndenza intetho apho ndathabatha eyona nkampani iphambili kwimithombo yeendaba zentlalo kwaye ndangqina ukuba akukho nanye kwezi mpazamo ineempembelelo zexesha elide, ezimbi kwiinkampani ezizenzileyo.
KuFacebook kutsha nje, uJay wabelana ngokubona ngenkonzo yeenqwelo moya kwaye ndakhumbula kwangoko ngale ngxoxo imangalisayo phakathi komhlekisi ULouis CK kwaye UConan O'Brien.
Ngelixa ndothuswa yitekhnoloji engakholelekiyo efumanekayo kubathengi kule mihla, ndiyaphoxeka mihla le kwingoma eqhubekayo yenkampani endiyibonayo kwi-Intanethi.
Ngaba iApple ifanele ibabambe abakuthiyayo?
Umzekelo omkhulu endinokuthetha nawo kuqala yi-Apple. Ndingumlandeli omkhulu weApple. Ndingomnye wee-nut-kesi ezaziseta i-alamu yakhe ye-3AM EST kwaye ndathenga ibhetshi yokuqala yeewotshi zeApple. Andikwazi ukulinda ukuyifumana ezandleni zam.
Funda kwi-Intanethi kwaye kukho i-echo ebangayo yeeteki, iibhlog, kunye ne-Apple-abathiyileyo ekubukeni. Bakuyo yonke indawo… kwaye akukho luvo lwabo lubalulekileyo kum. Kwaye andicingi ukuba naziphi na izimvo zabo kufanelekile kwiApple. Kubiza kakhulu, ukunqongophala kwezinto ezintsha, umgangatho kunye nemicimbi yesantya… zonke izikhalazo ezivela kubathiyi. Heyi abo bathiyileyo… isigidi esithengiswe ngosuku kwaye ngoku ku-odolo lwasemva ngaphaya kukaJuni. Abazondayo bebengazukuya nge-Apple Watch nangayiphi na indlela, kutheni ungabagona?
DK New Media Umlilo Abazondayo kwaye Uyabathanda Abathandi Bayo
Kunyaka ophelileyo, emva kokuchacha kunyaka ophelileyo onesidima, siqale ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Uninzi lwemicimbi yethu yayiyimpazamo yam. Sandisile ngaphandle kwezixhobo ezifanelekileyo saza sagqabhuka ukugcwalisa isikhewu. Endaweni yokuba sisebenze nzima sichonga abathengi abafanelekileyo, sithathe phantse wonke umntu ecela uncedo lwethu… kwaye ibiyinto enzima. Siye sopha saze sayila i-infographic malunga Iindidi zabathengi esasitshisa kuzo.
Samkele umsebenzi kunye nabathengi abaninzi ababephatha gadalala kwaye bengabizi. Abazange basijonge njengeqabane, basijonga ngathi ngumceli mngeni wokucinezela yonke ipeni yokugqibela. Khange ndibange abo banenzondo kuthi, sabagxotha.
Ngoku sibeka iinzame ezingaqhelekanga ekuqinisekiseni abathengi bethu kwaye siqinisekisa ukuba silungile ngokwenkcubeko kunye kwaye siyakholelwa ukuba singaphumelela ekusebenzeni nabo. Umahluko ubusuku nemini. Unyaka wethu obalaseleyo, sandisa umendo wethu, sonwabile, kwaye nomsebenzi esiwenzayo ubhetele kakhulu kunangaphambili.
Ukuzama ukukholisa abo basithiyileyo kwakudinisa. Kwaye ke asizami kwakhona. Ukuba umntu othile usiphatha kakubi, siphendula ngokunyanisekileyo kubo- nokuba yeyasesidlangalaleni okanye yabucala. Ngamanye amaxesha siyazivalela iimpondo, kodwa uninzi lwamaxesha sihamba nje. Kufuneka siqwalasele abathengi bethu abasixabisayo, hayi abo bangasokuze basiqeshe, basincomele, kwaye bahlala bethatha iimbiza ngathi.
Wanga abo bakuthiyayo? Umzamo omkhulu. Ndingathanda ukuthanda izithandwa zam. Ngabo basasaza igama, bandise ukuzibandakanya kwabo nathi, basifumanele abathengi, kwaye siyayixabisa into esiyifezekileyo kubo.
Ngaba Abaphumeleleyo Bayadibana Nabantu Abathiyileyo?
Xa ndijonga kwezamashishini, kwezemidlalo, kwezopolitiko, okanye nakweyiphi na enye inkokeli ephumeleleyo - ndiphantse ndihlale ndibona abantu abangabahoyanga abo babathiyileyo bazikhethela impumelelo yabo. Ukusilela endikubonileyo ibingabantu abaphulaphuleyo wonke umntu, bazama ukukholisa wonke umntu, kwaye abanakuze bahlangabezane nolindelo olungenakubekwa kwimarike.
Xa ndijonga kumashishini anje ngeselula, intambo, izinto eziluncedo, iinqwelomoya nezinye ... Ndibona abathengi besenza iimfuno ezingaphaya kwexabiso lemveliso okanye inkonzo abazimiseleyo ukuyihlawulela. Kwaye ukuba abayifumani into abayifunayo, baphosa i-hesy fit online ukuze uluntu lubone. Kwaye ukuba inkampani izama ukubakhonza ngcono kwaye yongeze iirandi ezimbalwa kwityala labo, abathengi bayabheyila kwisisombululo esisezantsi esilandelayo.
Uqikelelo lwam kukuba ukuba ______ iinqwelomoya zibaphatha kakubi abathengi bazo, basenokupakisha iinqwelomoya eziya kwindawo yabo elandelayo egcwele abathengi abasebenzisa ukukhangela kwi-Intanethi ukufumana elona xabiso liphantsi. Andiqondi ukuba uninzi lwabathiyileyo nokuba bayakhathala malunga nenkampani yeenqwelo moya, bazokukhalaza nokuba benza ntoni. Kwaye uninzi lweenqwelomoya lunee-hubs ezibekwe apho kunzima khona ukuba kude negama labo nokuba ubukhathalele.
Ufuna Uthando? Hlawula!
Kwelinye icala, ukuba ndihlawula iklasi yeshishini, ndithenga izithuthi zodidi oluphezulu, ndisebenzisa imali kwiwaranti eyandisiweyo okanye kwi-inshurensi, okanye kwintwasahlobo yelaptop ebiza kakhulu, andikhe ndibonakale ndinazo iingxaki abanye abahlangabezana nazo. Igumbi lokuhlala labahambi laseDelta- umzekelo - AMAZING kwaye ungathenga ukufikelela kuhambo oluninzi ukongeza. Ngelixa wonke umntu elindile kwiarhente yetikiti, ndithatha isiselo kunye nommeli weDelta wathatha igama lam watshintsha isenzo ukuba ndihambe. Akukho ngxwabangxwaba, akukho ngxwabangxwaba… ndayixabisa ndaza ndayihlawulela.
Ukuhlawula ngaphezulu, ndifumana inkonzo emnandi, phantse akukho xesha lokulinda, kunye neempendulo ezikhawulezileyo. Ukuba ndiza kufuna okona kulungileyo, kuya kufuneka ndikulungele ukuyihlawulela. Ukuba andinakukwazi ukuhlawula okona kulungileyo, kufanelekile ukuba ndoneliseke kokuseleyo.
Ungandivi kakubi. Ndiza kwenza umzamo onyanisekileyo wokuzama ukutshintsha umthengi ongonwabanga. Ndinetyala ubuncinci kakhulu kuba benze utyalomali nathi. Kodwa ukuba bayadakumbisa okanye bandiphatha kakubi okanye abasebenzi bethu, akukho mntu unexesha ledatha! Ndicinga ukuba kukho ipesenti ebalulekileyo yabathiyileyo kwi-intanethi ekufuneka iinkampani zixelele i-bugger.
tags: uphando lwe-edisonZithiye iintshaba zakhoUJay Baerthanda izithandwa zakhoizikhalazo onlineUphengululo lwe-Intanethiuvakalelotom webster
Ungalulinganisa njani ifuthe lokuKhangela kweAlgorithm?
Ngaba i-Snap ingaba linyathelo elilandelayo kuhambo lomthengi wakho?
Epreli 15, 2015 ngo-10: 23 PM
Iposi enkulu uDoug, enkosi.
Izinto ezimbalwa. Andithethi ngeempazamo ezinkulu kunye neengxaki zentlalo ezikhuthazayo. Akukho namnye umzekelo kumxholo ophambili owawunjalo, kwaye akukho namnye kwimizekelo encwadini oya kuba njalo, nokuba. Into endithetha ngayo ngamagqabantshintshi emihla ngemihla, izikhalazo, uphononongo lweenkwenkwezi ezi-1 kunye nezi-2 ezithi iinkampani phantse zonke ubukhulu kunye neentlobo ziphendule ngokungangqinelaniyo, ukuba kunjalo.
Ngaba kuthatha umsebenzi omninzi ukuphendula kwisikhalazo ngasinye, ngalo lonke ixesha, kuwo onke amajelo? Kunjalo. Kodwa uphando esilwenzileyo lubonisa ukuba ukonyuswa kobhengezo lwabathengi xa uphendula kwisikhalazo kuyaqwalaselwa, kunye nokwehla kobhengezo lwabathengi xa ungakuhoyi ukungakhathali kukhulu ngakumbi.
Ngaba ezinye iinkampani zinakho ukungahoyi izimvo nezikhalazo ezingalunganga? Ewe. Kodwa ezo nkampani aziqhelekanga.
Kwaye ndifuna ukucacisa ukuba i-Hug Your Haters prescription AKUKHO ukuba umthengi uhlala elungile. Akuyonyani, kwaye ayibobulumko ukuqhuba ishishini lakho ngaloo ndlela. Umyalelo endaweni yokuba umthengi uhlala EVA. Umahluko omkhulu. Ngapha koko, ngelixa ndingakhange ndingene kwimbumbulu yentetho, ingcebiso yam kukuba ungaze uphendule ngaphezulu kokuphindwe kabini kwintambo enye / isikhalazo / iposti yebhlog, njl.Ukunciphisa ukubuya ngelo xesha, ngesiqhelo.
Kwakhona kubalulekile ukuba uqaphele umahluko phakathi kwe-Offstage Haters ekhalaza ngasese, kunye ne-Onstage Haters ezikhalaza esidlangalaleni. Isitshixo kukuqonda ukuba eyokuqala ifuna impendulo, kwaye eyokugqibela ifuna abaphulaphuli. Ukungakhathali ngumdlalo obukeleyo ngoku, kwaye ngelixa unokuthi (ngokufanelekileyo) ufune ukuxelela umthengi onesikhalazo (okanye ocaphukisayo) kwi-F-OFF inyani kukuba ngokukodwa kwi-Onstage Haters, eyona ngozi ayisiyiyo yokulahlekelwa ngumthengi, kodwa endaweni yoko kwinto ababukeleyo abayicingayo malunga nenkampani yakho kunye nexabiso lakho.
Epreli 15, 2015 ngo-10: 48 PM
UJay- enkosi kakhulu ngokuthatha ixesha lokucacisa. Sele ndi-odole iikopi ezininzi zencwadi kubasebenzi bethu kuba olu lwazi luya kubaluleka kubaxhasi bethu.
Epreli 20, 2015 ngo-12: 02 PM
Ndisoloko ndicinga ngayo ngombono olula wokuba “umthengi akasoloko elungile,… kodwa bona bangabathengi”. Ke, oko kubangela ukuba ndicothise kwaye ndiphendule ngokufanelekileyo- ndifuna ukuqonda ukuba yintoni eyona ngxaki kwaye inokuba yintoni impendulo efanelekileyo kunye nesisombululo. Oko kukhokelele kwimizamo yam yokuba "ndanga lowo uzondayo."
Epreli 20, 2015 ngo-2: 19 PM
Andinyanisekanga, Curt. Ndicinga ukuba ngamanye amaxesha abantu ziijerks kwaye isimilo sabo esibi akufuneki sixolelwe. Kulula ukutsho kunokuba kwenziwe xa ungumnini weshishini ndicinga ukuba!